France oo looga digay xiritaanka Masaajidada | Gaaloos.com
Home » isis » islam » somalida qurbaha » France oo looga digay xiritaanka Masaajidada
France oo looga digay xiritaanka Masaajidada
Dowlada France ayaa todobaadyadii lasoo dhaafay xirtay sadex masaajid oo ku yaal dalkaasi oo lagu eedeeyey inay faafinayeen fikirka xagjirnimada, xili dowladaasi ay dooneyso inay sii dheerayso wakhtiga xaalada deg degta ah soconeyso kadib weeraradii 13kii bishii November ee Paris.
Sharciga Xaalada deg degta ah ee lagu soo rogay dalka France kadib weeraradii Paris ayaa la sheegay inay soconayaan mudo 3 bilood ah, waxayna xukuumada hada dooneysaa in lagu sii daro 3 bilood oo kale. Awooda Xaalada deg degta ah ayaa xukuumada fursad u siineysa inay xirto goobaha dadka ay isugu yimaadaan sida masaajidada.
Hay’adaha u dooda xaquuqul Insaanka ayaa sheegaya in xiritaanka masaajidada ay keeni karto dhibaatooyin horleh, iyagoo sheegay in kooxaha xagjirka ah intooda badan aysan kasoo dhex baxin masaajidada balse ay yihiin dhalinyaro siyaabo kale gedisan u qaata fikirka xagjirnimada.
Wadanka France ayey ku nool yihiin Muslimiin gaareysa 6 milyan ayaa horey u sheegayey inaysan heysan masaajido ku filan, halka dowlada laga yaabo inay hada xirto 100 masaajid oo ah kuwii horey u furnaa.
Dhinaca kale waxay dood xoogan ka taagan tahay isbedalka uu Madaxweyne Francois Hollande doonayo in lagu sameeyo dastuurka dalkaasi, si markaasi uu muwaadinimada uga xayuubiyo dadka ku dhashay wadankaasi ee lagu helo falalka la xariira argagaxisada.
Title: France oo looga digay xiritaanka Masaajidada